Isampula esisisigxina soNcedo lweeKholeji zeeKholeji
I-Critique yoMpendulo kumbuzo oqhelekileyo, "Kutheni Isikolo Sethu?"
Iingqinisiso ezongezelelweyo zeekholeji ezivunyelweneyo ziyakwenza isikhubekiso kubafakizicelo. Abafundi abaninzi babeka ixesha elibalulekileyo kwisitatimende sabo esisekude kodwa bakhuphe icandelo elincinci lokufaka isicelo. Umphumo oqhelekileyo unokuvelisa isicatshulwa esincinci .
Inqaku elomeleleyo elingezansi labhalwa ngokuphendula kwisicelo kwiKholeji yaseTrinity University yaseDuke University. Isikhokelo sesicatshulwa esongezelelekileyo sicele sibuze, "Ukuba ufaka isicelo kwiKholeji yoButhathu boBugcisa nezoNzululwazi, nceda xubusha ukuba kutheni ucinga ukuba uDuke ungumdlalo ofanelekileyo kuwe.
Ngaba kukho into ekhethekileyo kwiDuke ekhangayo? Nceda unciphise impendulo yakho kwisiqendu esinye okanye ezimbini. "
Umzekelo Umxholo oQinisekayo onamandla
Umbuzo obuziwe apha ufana neengqinisiso ezininzi zokuncedisa. Okubalulekileyo, abantu abamkelweyo bafuna ukwazi isizathu sokuba isikolo sabo sinomdla kuwe.
Xa ndandwendwela i-Duk campus ekugqibeleni, ndakhawuleza ndiziva ekhaya. Ukwakhiwa kwe-Gothic kunye nokuhamba kwe-shaded shade kwakha umoya wokuthula kodwa ucingisise. Indawo leyo kanye ngasemzantsi - leyo, njengeAlabamian, ibalulekile kum - kwaye iphela jikelele njengoko ibonisa izithethe zaseYurophu kunye nehlabathi eliqhelekileyo. Ikharityhulam yezobugcisa be-College of Trinitarian ibonisa kwakhona lo mbutho oyingqamaniso weli xesha leMzantsi kunye nehlabathi elidlulileyo. Ngokomzekelo, ndicinga ngokubalulekileyo kwimbali, kwaye ndinomdla kakhulu ekudibeneyo kwimihlaba yeendawo kunye neengingqi ezifundiswa ngu-Duke's history program. Ukuhlanganiswa kweendawo ezinikezelayo kubonakala kwiindawo ezingapheliyo zengcali. Enye into enomdla kukugxila kwingingqi ye-US neKhanada, idibaniswe nokufundisisa ngokwasemthethweni kwabasetyhini kunye nesini okanye i-African Diaspora. Ngokuxubusha kunye nokudibanisa ezi zinto zimbini, ukuqonda kwam kwi-Amerika yaseMzantsi Melika kunye nokunye okuninzi-kuya kuphuculwa kakhulu. Le ndlela yokwenza izinto ezintsha kunye nezoguquguqukayo kwimiba yomdabu kunye neyomthonyama inomdla kakhulu kum. Ndiyazi ngegama kunye nomhlobo okwangoku ubhalisiwe kwiKholeji yeZiqu zintathu ukuba ikharityhulam ye-liberal iyinselele, kodwa iyavuza. Ndiyakholwa ukuba ndingaphezu kwamalungiselelo enje, kwaye ndiya kukhula kule meko. I-campus yaseDuke University ivele ivakalelwa njengekhaya; Ndiyakholelwa ukuba amathuba ayo okufunda aya kubonelela ngendawo ekhuthazayo apho ndicinga ukuba ndingowakho.
I-Critique ye-Supplemental Essay
Okokuqala, cinga ngokukhawuleza. Amagosa avunyelwe ukuba azi ukuba kukho into ethile "ngokukodwa kwiDuke" eyenza umfaki sicelo ufuna ukuya khona. Inqaku elibi alinakuxoxa ngezixhobo ezikhethekileyo kwiDuke . Isincoko esihle sichazwa kwaye sibonisa ulwazi oluthile lwesikolo.
Isinampu yesampula iphumelela ngaphambili. Nangona isicatshulwa singumhlathi omde, umbhali uveza izinto ezintathu ezizenze ukuba afune ukuya khona:
I-campus ekhangayo kunye nesibheno sayo seGothic neSouth
Ubume bezinto eziguquguqukayo kwikharityhulam yekharityhulam
Inyaniso yokuba unomhlobo kwiDuke
Le ngongoma yokugqibela ayibalulekanga kwinkqubo yokumkelwa kwaye umbhali wayelungile ukukhankanya ngokuthe ngqo.
Iphuzu lokuqala linomlinganiselo obanzi. Iikholeji ezininzi zinomsebenzi oncomekayo wezobuGothi, ngoko loo nto ayikho iDuke. Nangona kunjalo, umbhali udibanisa i-campus kwi-Southern's own. Ubonisa kwakhona ukuba uye watyelela i-campus, into engeyinyaniso kubafaki-zicelo abaninzi abangafaka izicelo ngokukhawuleza kuluhlu olude lwezikolo eziphakamileyo.
Iphuzu lesibini malunga nekharityhulam yekharityhulam ibalulekileyo kule mpu melelo. Lo mceli uyazi into ephantsi kweyunivesithi. Uphande ngokucacileyo ikharityhulam. Akayisebenzisi kwiDuke ngenxa yobuhle bayo okanye idumela layo, kodwa ngenxa yokuba uyathanda indlela eyunivesithi ifumana ngayo ukufunda.
UkuPhepha iimpazamo ezongezelelweyo
Ngokuqhelekileyo, umbhali uye wagweba iimpazamo eziqhelekileyo ezongezelelweyo kwaye wabhala impendulo ngokufanelekileyo kwiyunivesithi ngokukhawuleza.
Amagosa avumelekileyo ngokuqinisekileyo aya kuqaphela ukuba lo mfaki sicelo wenze uphando kwaye unesizathu sokucinga ukuba ufuna ukuya kwiDuke.
Ukuba isicatshulwa esongezelelweyo kumbuzo othi "Kutheni Isikolo Sethu?" ingafakwa kwizikolo ezininzi, awuphumelelanga ukuphendula ngokukhawuleza ngokukhawuleza. Lona akusiyo indawo yokuvelisa okanye ivila. Yenza uphando lwakho, kwaye uchaze izizathu ezizodwa zokuba kutheni isikolo sifana nomdla, ubuntu kunye neenjongo.
Bhala isicatshulwa sakho esongezelelweyo ukuze uqiniseke, ngokuthe ngqo, kwaye ujoliswe kulo kholeji ethile.
Umzekelo weModeli kwiMpawu kwiFiction
Impendulo emfutshane Umhla wokuqalisa
Umzekelo wesicelo esiqhelekileyo Impendulo emfutshane
Ukujongana noKwahlukana kwiSicelo soLuntu oluPhendwayo
I-Essay Application Common kwiindawo eziNenjongo
"Amadoda Ami" - Isampula yoLwazi lweSicelo oluqhelekileyo lweNketho # 1
Impendulo Efutshane esifutshane
IsiCwangciso seSicelo esisisidlangalaleni sokuPhendwa kweNkcazo 1 (ngaphambi kuka-2013)
Sebenzisa la magama aseLatini kwiNgxoxo zesiNgesi
Funda ngeCandelo loLwa kwiMihlaba yomhlaba
Inkcazo: Incwadi yamaRoma
Amadoda Nabesifazane-Ulingana Ekugqibeleni?
Ukhuseleko lweeMoose for Hikers
Iimpawu eziphezulu ezi-10 zaseFransi
Zingaphi i-Moles ze-Atom zi-1 ze-Sucrose?
Ukukhangela iNkcazo yokuSiza koLuntu
I-Streetcar ebizwa ngokuba ngumnqweno: UMthetho owodwa, Isiqendu 1
I-Biography kunye neProfayili kaUriya Faber
Funda Zonke Ngeentlanzi zePinecone
UMary Ann Shadd Cary
IiNkcazo zeNkcazo zentlawulo ye-Personal Online kwi-Akhawunti ye-Akhawunti
Indlela yokuchonga iGreenfly Darner Dragonfly
Kutheni iLeicester City ibizwa ngokuba yizimpungushe?
Iingcaphuno Zentlawulo Zentela
I-Grey Gland kunye neeHormoni zayo
Ukupheka kwiSabatha ye-Ostara
25 Abantu abaye baxhamla ngengozi ngeendawo zabo